Umhla My Pet » Indlela Yokunyamezela Emva Break Up
ngokuthi Lisa Reynolds
Indlela Yokunyamezela Emva Break Up
ukubuyekezwa: Sep. 23 2020 | 2 min ukufunda
Lahlani Ben & Jerry ngayo. Kwaye ibhokisi izicwili. Ngenxa yokuba ukuba uphume khona apho ixesha wabeka ubomi bakho babuyelane. Akuyi kuba njengabathile uthando film engummangaliso apho zisuka ukufumana phezu umntu uze ugqithele olandelayo nakusekuqhwanyazeni kweliso. Kodwa ngokwazana phandle phaya nokugcina ingqondo yakho esebenzayo akuyi ucinge kangangoko malunga yoqhawulo-up yaye ethubeni iimvakalelo iza kuphelelwa yaye ngomsonto engabonakaliyo ukuba ububanzi kwi intliziyo yakho ndiya kuyaphula ngoncedo kwezi zintathu zilandelayo:
Nokuba ke umsebenzi wakho okanye umsebenzi ngokuzithandela okanye umxube zombini okanye ekholejini okanye umsebenzi amava, hlala ingqalelo ukuba. Khumbula ukuba ezi zinto ngekamva lakho kwaye musa ukuvumela ezinye yoqhawulo-up ukufumana ngendlela nakuba kusuke kuvakale nzima kakhulu ngexesha ukuba. Kananjalo wena kwayena udidi sangokuhlwa. Nje ukuba wena ezingagugiyo kwinkqubo. thabatha kuphela oko ukuko ndayeyisa!
Thetha phandle abantu Wazazi. Nangona masinxibe umlebe abantamo eliphezulu kwihlabathi ngaphandle akukho ihlazo uwaphule phantsi wazithi iimvakalelo yakho yoqhawulo-up vulnerably kumpompoza usapho kunye nabahlobo. Oku kuya engqondweni yakho entlokweni yakho abo iinyembezi ukuba caphukisayo ukuba uphume uyazi ukuba okanye hayi. Ngoko ke abantu abaninzi zama ukumelana baqhawula-up ngokwazo kwaye kuyayonakalisa impilo. Xa uthetha nabantu abathanda ukuba oko uya kukhathaza kuthi uya kuba nako ukuthabatha elimiweyo ngemvo eliqaqambileyo kakhulu lula namehlo eliqaqambileyo.
Ndiyazi ukuba ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukuba mnandi xa usentlungwini. Kodwa zama kunzima yakho ukutyhalela ngoba iya kuba kuyo ekupheleni. Phuma (xa akuyi waziqhekeza!) uvuye wena nentsapho okanye abahlobo kwi pub, e konsathi okanye neyeqonga, etc … Shiya iingxaki zakho ekhaya. Zigcine abanomdla nemyoli azithandayo efana nokufunda, ukuphulaphula umculo ndibukele iTV. Musa ukuzivumela kulahleke ibe umntu uya kuba xa usenza kunokuba indlela nzima ukuba usuka phi na aba. Thatha ixesha lakho lokufumana uthando olutsha. Musa uziva phantsi koxinzelelo nguye nabani ukuba enze njalo. Ekuhambeni kwexesha lakho, makhe uthando.
5 Iinkolelo Ukuthandana ukuba wonke umntu ecinga ukuba okwenyaniso
Impress Nge Online Dating Your Yabucala Photo
Indlela Nentlungu Amaqhuma Ukuthandana umxokozelo
Kuba Love kwe Pet
Iingcebiso Ukuthandana Tinder neZinye Apps Mobile